Dr. Tint Swe's Writings: Surgery ABC ခွဲစိတ်ပညာ သူငယ်တန်းဖတ်စာ (၂)
Surgery ABC ခွဲစိတ်ပညာ သူငယ်တန်းဖတ်စာ (၂)
ပညာမစုံသေးပေမယ့် လူနာကအကုန်လာမယ်။ မုတ် (မုတ္တ) ရောဂါလည်းပါတယ်။ (ဟိုက်ဒရိုဆီးလ်) လို့ဆေးစာမှာ ရေးတယ်။ မုတ်ရောဂါဖြစ်ကြောင်းကုန်စဉ်တော့ တပုဒ် ရေးထားတယ်။ အခုက စာဖတ်ချိန်မဟုတ်ပါ။ ပညာဆိုတာ စုံတယ်မရှိပါ။ ခွဲစိတ်ဘို့သာပြင်ပေတော့ဗျာ။
မုတ်ရောဂါလူနာက ပေါတယ်။ ခွဲကုသရတာချည်းပဲ။ မခွဲရတဲ့နည်းတွေစမ်းဘူးတယ်။ အရည်ကိုဖေါက်ထုတ်ပြီး အိုင်အိုဒင်း ထိုးပေးတယ်။ ယာယီသက်သာတာပဲရှိတယ်။ ခွဲရတာမှ အန္တရာယ်အနည်းဆုံးတခုမို့ လက်သင်တွေအတွက် အကွက်ပဲ။ ခွဲသာခွဲ။
ဆရာဝန်ဖြစ်စ တောနယ်မှာ တယောက်တည်းတာဝန်ကျတော့ သောင်ပြင်လွှတ်ခံရတဲ့အကောင်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့ ရေးရဲတယ်။ တောမှာ ခွဲစရာပစ္စည်းစုံတာမဟုတ်။ ခွဲစိတ်ခန်းဆိုတာမရှိ၊ အပြင်လူနာကြည့်ပြီး အဲဒီနေရာကပစ္စည်းတွေကို ဟိုဖယ်သည်ရွေ့နဲ့ (အိုတီ) လုပ်ရတယ်။ ပိုးသန့်ခြင်းစာလည်း ရေးထားပါတယ်။
ခွဲစိတ်ကရိယာ အများကြီးပြည့်စုံစရာမလိုပါ။ သွေးကြောညှပ် ၂-၃ ချောင်း၊ ချုပ်အပ်၊ ချုပ်ကြိုးoသာလိုတယ်။ ဓါရိုးမရှိလည်း ရတယ်။ (ဘလိတ်) ဓါးမရှိရင်လည်း မုတ်ဆိတ်ရိတ်ဓါးအသစ်က ဒေါင့်လေးဒေါင့်ဟာ ခွဲလူနာလေးယောက်ခွဲလို့ရတယ်။ အရည်ဖေါက်ထုတ်ဘို့ရာ (ထရိုကာ) နဲ့ (ကင်ညူလာ) မရှိလည်းရတယ်။ ကတ်ကြေးကတော့ ၂ မျိုးရှိမှ။ ဘယ်တော့မှ တောသားမလုပ်ရတဲ့ မေ့ဆေးဆရာဝန်တွေ အလည်မလာလည်းရတယ်။
လက်ထောက်ဆရာမကနေ မုတ်ကို လက်နှစ်ဖက်သုံးပြီး အရေပြားပြောင်ပြီး ပြူးထွက်နေအောင် ကိုင်ပေးထား။ ထုံဆေးကို ခွဲမယ့်ဓါးရာအတိုင်း ဒေါင်လိုက်ထိုးမယ်။ ၁ဝ-၁၅ စီစီဆိုရတယ်။ ခွဲစိတ်ရာမှာ ရေနွေးဟာ အသုံးအဝင်ဆုံးပဲ။ ဓါးခွဲလို့ သွေးထွက်တာနဲ့ (၆ x ၆) ရေနွေးဝတ်နဲ့ ဖိဖိပေးရတယ်။ တော်တော့သွေးထွက်တာ ချည်စရာမလိုဘူး။ (ဖေါရိန်း ဘော်ဒီ) နည်းတာပေါ့။ ဓါးသွားကို ခပ်စောင်းစောင်းလေးထားပြီး မုတ်အိတ်အဖုံးလွှာအထိ တလွှာချင်းခွဲခွဲသွားရမယ်။ ကွာကွာကျသွားတာ ကြည့်လို့လှတယ်။ အရှည်အလျားဟာ အရေပြားနဲ့ တူပါစေ။ သွေးထွက်ရင် ရေနွေးဝတ်ပဲ။ သွေးထောင်ပန်းနေလည်းရတယ်။ လိုမှသာ ကြိုးနဲ့ချည်ရတယ်။
မုတ်အိတ်အဖုံး ပြာလဲလဲ့လေးတွေ့တာနဲ့ လက်ညှိုးနှစ်ချောင်းသုံးပြီး ဘေးအလွှာနဲ့ ခွါပေးရတယ်။ ထုံဆေးလိုရင် ထပ်တိုးပါ။ အတုံးခွဲနည်းကောင်းတယ်။ ကတ်ကြေးမပါ လက်ချောင်းသာသုံးပါ။ အဲဒီမှာ လက်သာဘို့ လိုလာပြီ။ မုတ်ရောဂါခွဲတာမှာ အန္တရာယ်မရှိဘူးဆိုပေမယ့် ခွဲပြီးနလံထတာမြန်ဘို့ရာ ကြိုစဉ်းစားရတယ်။ အကြောရောင်တာ ကြာနေတတ်တယ်။ သုက်ရည်သွား အကြောဖြူလေးနဲ့ သူ့ဘေးက သွေးလွှတ်ကြော၊ သွေးပြန်ကြောတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး ဖိအား မသက်ရောက်စေရပါ။
မုတ်အိတ်ထဲက အရည်တွေကို (ထရိုကာ + ကင်ညူလာ) နဲ့ ထိုးဖေါက်ပြီးထုတ်ယူမယ်။ (ကစ်ဒ်နီထွေး) ခွက်နဲ့ခံမယ်။ ဝါကျင့်ကျင့်အရောင်ဖြစ်မယ်။ နို့ရည်အရောင်ဆို ရောဂါတခုခုပါရှိနေတယ်။ ခွဲပြီး ဆင်ခြေထောက်ရောဂါဆေးပေးရမယ်။ ကိုယ်ခန္ဓာရည်တွေထဲမှာ HIV ပို ပါမနေဘူးမပြောနိုင်တာတော့ သတိထားပါ။
အိတ်ကိုဖေါက်တဲ့နေရာကနေ အနေတော်ကျယ်အောင် ကတ်ကြေးနဲ့ခွဲပြီး ကျားအစိနောက်ဖက်ကနေ ပြောင်းပြန်လှန် ချုပ်မယ်။ အိတ်ခွံကြီးလွန်းရင် ကိုက်ဖြတ်ရမယ်။ အိတ်ကို ပြန်လှန်ချုပ်တဲ့အခါ အထူအပါးအလိုက် (ကက်ဂတ်) ၃-ဝ၊ ၂-ဝ ရွေးရမယ်။ ပြန်ပိတ်တဲ့အခါ အတွင်းလွှာကိုတော့ ၃-ဝ ကောင်းတယ်။ အရေပြားကတော့ ခြည်ကြိုး။ နိုင်လွန်လည်း ရygတယ်။ ခွဲပြီးလည်း ကပ်ပယ်အိတ်ကို ခေါင်းပေါင်းပေါင်းသလို စနစ်တကျထုပ်ထားပြီး ဖြစ်နိုင်ရင် ပေါင်နှစ်ဖက်ကို ပလာစတာကြီးကြီးနဲ့ကပ်ပြီး အဲတာအပေါ်မှာ ခေါင်းပေါင်းထားတဲ့ကပ်ပယ်အိတ်ကိုတင်ထားပြီး ကောင်းကောင်း နားစေရတယ်။
ခွဲစိတ်ရာမှာ ပိုးသန့်နည်းအပြည့်အစုံပါရင် တချို့ဆရာဝန်တွေက ပိုးသေဆေးမပေးပါ။ မြန်မာပြည်မှာက ကြိုတင် ကာကွယ်တဲ့သဘောနဲ့ ပေးကြရတယ်။ အနာသက်သာဆေးတော့ မလွဲမသွေပေးရတယ်။ လူနာသတ္တိကောင်းလည်း အရောင်သက်သာဘို့ ပေးရပါမယ်။
ခွဲလူနာတိုင်း ၂၄ နာရီအတွင်း အထဲ-အပြင်မှာသွေးယိုသလားကြည့်ရတယ်။ နောင်မှယိုတာကတမျိုး။ ချုပ်ရိုးဖြေတာကို ပုံသေနည်းရှိတယ်။ ခေါင်းနဲ့ကလေးဆိုရင် အစောဆုံး ၅ ရက်နဲ့ဖြေတယ်။ ခြေထောက်နဲ့ အသက်ကြီးသူတွေကို ၇-၈ ရက်။ မုတ်ရောဂါက အများအားဖြင့် လူလတ်ပိုင်း၊ ဖြစ်တာကလည်းအလယ်ပိုင်းဆိုတော့ ၆-၇ ရက်။
ခွဲပြီးလူနာ ဖုတ်ဖက်ခါထသွားလို့တော့မရပါ။ ခွဲပြီးငြိမ်နေဘို့တာဝန်ကို လူနာကိုပေးအပ်ရတယ်။ ဒါမှ အနာကျက်တာ ပိုကောင်းတယ်။ အဲ့့ ခွဲတဲ့ဆရာဝန်လည်း ခွဲနေတုံးမှာ လက်မသရမ်းရ၊ မကြမ်းတမ်းရပါ။ သက်ရှိ (တစ်ရှူး) တွေကို တတ်နိုင်သမျှ ငြင်ငြင်သာသာကိုင်တွယ်တတ်ရတယ်။ မလိုတဲ့နေရာကို ခွဲစိတ်ကရိယာတွေနဲ့ မညှပ်မိ၊ မဖြတ်မိလေ ကောင်းလေ။ ကပ်ပယ့်အိတ်လိုနေရာကတော့ မထောင်းတာပေမယ့် အလှအပအတွက် ကြည့်ရတဲ့နေရာတွေဆိုရင် အခွဲပြီးအမြင်လှနေစေဘို့ အရေပြားကို ချွန်တဲ့ခွဲစိတ်ကရိယာနဲ့ ကိုက်ညှပ်တာကို နည်းနိုင်သမျှ နည်းစေရမယ်။
အကျိတ်အိတ် (ဆစ်စ်) လို၊ အဆီအိတ် (လိုက်ပိုးမား) လိုကိုခွဲတာမျိုးမှာ အရေပြားကို ဓါးနဲ့ခွဲပြီးတာနဲ့ အရေပြားနှစ်ဖက်ကို တဖက်တချက်စီကို ဆွဲဟပေးတဲ့အခါ (အဲလစ်စ် ဖေါဆက်) နဲ့ ညှပ်ဆွဲရတာတော့ ဆရာဝန်တိုင်းသိတယ်။ အဲတာမှာ အရေပြားအောက်နားလေးက အတွင်းလွှာလေးကိုသာ (အဲလစ် ဖေါ့ဆက်) သွားလေးတွေနဲ့ ညှပ်ဆွဲရင် အရေပြားမှာ အရာမကျန်ရစ်စေဘူး။ အထူးသဖြင့် အပျိုမိန်းကလေးတွေ ရင်သားအကျိတ်ခွဲရင် သတိထားပါလေ။
အရည်တွေက နောင်လည်းထွက်ချင်ထွက်မှာပေမယ့် အိတ်ကိုလှန်ချုပ်လိုက်တော့ သူ့ဖါသူပြန်စုပ်ယူမယ်။ အဲလိုခွဲနည်းကို အရှင်းပျောက်အောင်ခွဲစိတ်နည်းလို့ ခေါ်တယ်။ တလုံးပြီးပြီ။ ကံကောင်းရင် နှစ်လုံးတွဲလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ အဲတာဆို အရေပြားမှာ ဓါးရာတခုတည်းနဲ့သာ မုတ်အမွှာကို ခွဲပေးနိုင်ပါတယ်။ လူနာက ကြိုတင်ပြောထားလို့ သူ့ဇနီးကလည်း သဘောတူရင် သားကြောဖြတ်တာကိုပါ လက်ဆောင်အဖြစ် ခွဲပေးနိုင်ပါသေးတယ်။
- Hydrocele မုတ်ရောဂါ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hydrocele.html
- Sterilization ပိုးသန့်ခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/sterilization.html
- Hernia အူကျ-မကျ သိပါရစေ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hernia.html
- Epididymitis and Orchitis ကျား အစေ့-အကြောရောင်ခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/…/epididymitis-and-orchit…
- Varicocele (ဗေရီကိုဆီးလ်) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/varicocele.html
- Undescended testicle ယောက်ျားလေးမှာ အစိတဖက်မပါ http://doctortintswe.blogspot.com/…/undescended-testicle_27…
- Surgery ABC ခွဲစိတ်ပညာ သူငယ်တန်းဖတ်စာ (၁) http://doctortintswe.blogspot.com/2015/12/surgery-abc.html
▼ 2016 (2227)
Surgeons are the most attractive doctors
Malnutrition အာဟာရချို့တဲ့နေတဲ့ မြန်မာစာ
Biased Doctor ဘက်လိုက်တဲ့ ဆရာဝန်
Happy Burmese ဟက်ပီးကြပါသလား
A Gathering in Monywa
Happy 2017 ဟက်ပီး မြန်မာစာ
ချပ် နဲ့ ချက်
Sleepwalking အိပ်ရင်း လမ်းလျှောက်
Homemade ဆိုင်စာမကြိုက်တဲ့ ဆရာဝန်
Water Birth ရေထဲမှာ ကလေးမွေးခြင်း
Counting Backwards နောက်ပြန်ရေတွက်ခြင်း
Low birth weight baby care လမစေ့ကလေးပြုစုနည်း
Humor and Satire ရီစရာမှာ စေတနာပါမှ
Nurse Post Chat and Comments သူနာပြုတယောက်နဲ့ ချတ်...
Female hormones မိန်းမဟော်မုန်း
History repeats itself ဘီးတပတ်လည်ခြင်း
Never Let Them See You sweat ချွေးထွက်တာ လူမမြင်စေ...
Photo-shot model ကျွန်တော့်မှာ မော်ဒယ်မရှိ
Chest infection အသက်ရှူလမ်းပိုးဝင်ခြင်း
Karl Marx ကားလ်မတ်စ်
Testosterone (တက်စတိုစတီရုံး) ကျား-ဟော်မုန်း
Hypertension (2) သွေးတိုးရောဂါ (၂)
စပ် နဲ့ ဆက်
William Tell သက်ပြင်းချသံ
ပြေ နဲ့ ပြည်
Aflatoxin ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဓါတ်တွေ့လို့ မြန်မာပြ...
Food for Health တည့်တဲ့အစာ လူကျန်းမာ
Honeymoon Cystitis ဟန်းနီးမွန်းမှာ ဆီးအောင့်တာ
Intestinal Tuberculosis အူ (တီဘီ)
What to change ဘာကို ပြောင်းမှာလဲ
Compromised History သမိုင်းကို ဘလော့လုပ်ခြင်း
Somatoform pain disorder နာကျင်မှုဝေဒနာတမျိုး
You all are fortunate ပြည်တွင်းနေရ ကံကောင်းကြ၏
စည်း စီး ဆီး ဆည်း
Nurse Uniform သူနာပြုဝတ်စုံ
အဲဒါ နဲ့ အဲတာ
Frequent urination ဆီးသွားတဲ့အကြိမ်များစေနိုင်တဲ့ ...
Life Choices နှစ်သစ်အတွက် အကြံပြုချက်
New Year Habit နှစ်သစ်ကူးရောဂါ
Stem cell therapy (စတမ်ဆဲလ်) နဲ့ကုသခြင်း
Medical Tests for Your 60s and Up အသက်ကြီးသူများေ...
ကောင်းခြီး နဲ့ ကောင်းချီး
E. coli အီး-ကိုလိုင် ဗက်တီးရီးယား
Nurse uniform သူနာပြုဝတ်စုံသစ်
First Aid for Seizure တက်နေသူ ပြုစုနည်း
ချင်း နဲ့ ခြင်း
My Attitude သဘောထား
Survived ကိုယ်ဝန်မပျက် မြန်မာစာမပျက်
Commission Fees ကော်မရှင်ခ မရပါ
Blood donation and Diseases ဒီရောဂါရှိသူတွေ သွေးမလ...
ဆီ နဲ့ စီး
Face to Burma မြန်မာပြည်ကို နောက်ဆုံးမျက်နှာမူခဲ့တ...
Female lock-up room သုံးညတာအိပ်ခဲ့ရတဲ့အခန်း
Facebook Etiquette ဖေ့စ်ဘွတ် ကျင့်ဝတ်
Nurse-Patient ဆရာမ-လူနာ ဆက်ဆံရေး
Homemade Humidifier လက်ဖြစ်ရေငွေ့ပေးနည်း
I, Me, Mine, Myself ကျွန်တော်
Breast Cancer Today ရင်သား-ကင်ဆာ အရင်ကနဲ့မတူပါ
Russia bath lotion poisoning ရုရှားမှာ အရက်ပါတဲ့လိ...
Sore nipples နို့သီးခေါင်းနာ
Pregnancy fluid reverses ageing bones
Men on the Chairs ကုလားထိုင်ပေါ်က ဆရာများ
Planet & Star သိပ္ပံနဲ့ ဝိဇ္ဇာ
Spell It Right (2) ဆရာဝန်နဲ့ မြန်မာစာ (၂)
Medications during pregnancy ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်သုံးန...
Merry Christmas 2002 ၁၄ နှစ်က ခရစ္စမတ် (၂)
Merry Christmas 2002 ၁၄ နှစ်က ခရစ္စမတ် (၁)
Real Gold ရွှေစစ်ရဲ့လား
Dehiscence After Surgery ခွဲပြီးလူနာ ဗိုက်ပွင့်ထွက...
Ductal carcinoma in situ ရင်သားကင်ဆာတမျိုး
Surgery ABC ခွဲစိတ်ပညာ သူငယ်တန်းဖတ်စာ (၁)
You can do it! အင်္ဂလိပ်စာ